भाईरल झाक्रीलाई सर्पको बाण हानेर मा’र्नेको खोजी सुरु,कसले हा’न्यो त सर्पको बाण? (भिडियो हेर्नुस) – List Khabar
Home / समाचार / भाईरल झाक्रीलाई सर्पको बाण हानेर मा’र्नेको खोजी सुरु,कसले हा’न्यो त सर्पको बाण? (भिडियो हेर्नुस)
admin October 22, 2021 समाचार Leaveacomment 228 Views
केही दिन अघि ताप्लेजुङमा एक झाक्री कृष्ण घतानि को सर्पले टोकेर मृत्यु भएको थियो । ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्र नभै अन्य ठाउँमा समेत चर्चामा रहेका झाक्री बिरामिलाई झारफुक गर्दै आएका थिए । हुनत अहिलेको पुस्ताले धामी झाक्री इत्यादिमा खासै बिश्वास राख्ने गरेको पाइदैन । यसलाई एक अन्धबिश्वास भनेर व्याख्या गर्ने गर्दछन । तर कतिपय अझै पनि धामी झाक्रीमा बिश्वास राखी बिरामी हुदँ झारफुक गर्न पुग्ने गरेका छ्न । धामी झाक्रीहरु पनि आफुमा अदृश्य शक्ति रहेको बताउने गर्छन ।
झाक्री कृष्ण घतानिको सर्पले टोकेर मृ”त्यु भए पछि फेरि अहिले अर्को घटनाले चर्चा पाएको छ । उनको मृ”त्यु सामान्य रुपमा सर्पले टोकेर नभै अन्य झाक्रीले सर्पको बान हानेर मा”रेको उनका परिवार र केही झाक्रीहरुले बताउने गरेका छन । कतिपय धामी झाक्रीले सर्प, मसान इत्यादी खेलाउने गरेको र तिनैले बान हानेर ती झाक्री कृष्ण घतानिको मृत्यु भएको बताईएको छ । यसै क्रममा ताप्लेजुङमै एक कालिमाता भेटिएकी छिन,जो बिगत ६ वर्ष देखि साथमा सर्प राखेर बस्ने गरेकी छिन ।
धामी झाक्रीले बान हान्न सक्ने मसान खेलाउन सक्ने नसक्ने बारेमा ती कालिमाता सगँ बुझ्दा त्यो अदृश्य शक्ति हुने उनले बताईन । तर त्यसो गर्नु पाप हुने उनले बताईन । आफुसगँ पनि त्यो शक्ति रहेको उनले संकेत गरिन । तर मसान भने आफुले नखेलाउने उनको भनाई थियो । भाइरल झाक्रीलाई कस्ले बान हानेको हो त भन्ने कुरामा त्यो कसैले नगरेको उनको भनाई छ । कसैलाई बान हान्नु भनेको आफुसगँ भएको शक्तिको दुरुपयोग हुने उनी बताउँछिन । शक्तिको दुरुपयोग गर्दा त्यो शक्ति नरहने पनि उनको भनाई छ ।
सबैलाई उक्त शक्ति प्राप्त नहुने र प्राप्त गर्नेहरुले त्यसलाई सबैको भलो गर्नका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने उनले बताईन । कसैले आफ्नो अदृश्य शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो शक्ति हराउने पनि बताईन । त्यसैले कृष्ण घतानिलाई कसैले बान हानेर मारेको झुटो भएको उनले बताईन । आफुलाई बिश्वास गरेर आउने बिरामीलाई आफुले ठिक गरेर पठाएको उनले बताइन । आफुले अहिलेसम्म कहिल्यै आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग नगरेको पनि उनले बताईन । यदि कोहिले बान हानेर कृष्णको मृत्युु भएको भए ती ब्याक्ति आफुकहाँ ल्याउन उनले चुनौती दिइन ।
बिगत ६ वर्ष देखि धामन सर्प आफुसगँ राख्दै आएकी उनी सर्पलाई जस्तो सिकायो त्यस्तै गर्ने बताइन । ६ वर्ष देखि आफुसगैँ खाने सुत्ने गरेको सर्पले आफुलाई कहिल्यै नटोकेको पनि उनले बताईन । आफुसगँ रहेदेखी पानी मात्र खाएर सर्प बसेको उनले बताईन । आफुले खाए पछि मात्र सर्पले पानी खाने गरेको उनको भनाई छ । सामान्य रुपमा सर्पले कसैलाई नटोक्ने, यदि उस्लाई केही असुरक्षा महसुस भएमा मात्र टोक्ने उनले बताईन । त्यसैले कसैले सर्पको बान हानेर मारेको भन्ने हल्ला मात्र भएको उनले बताईन । (भिडियो हेर्नुस)
Previous बन्जीजम्पका क्रममा डोरी चुँडिएपछि ८० फिट तल खसेर महिलाको मृत्यु
Next अनुपमले जब नेपालमा ३७ वर्ष पछि आफ्नो सहकर्मी भेटाए